သခွားမွှေးသီးနှံ စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ အလေ့အကျင့်ကောင်းများ အပိုင်း (၁) - Myanmar Farmers' Portal
Home သစ်သီးဝလံနှင့် ဥယျာဉ်ခြံသီးနှံ သခွားမွှေးသီး သခွားမွှေးသီးနှံ စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ အလေ့အကျင့်ကောင်းများ အပိုင်း (၁)
သခွားမွှေးသီးနှံ စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ အလေ့အကျင့်ကောင်းများ အပိုင်း (၁)
မြန်မာအမည် – သခွါးမွှေးသီး
အင်္ဂလိပ်အမည် – Muskmelon
သိပ္ပံအမည် – Cucumis melo
မျိုးရင်း – Cucurbitaceae
သခွါးမွှေးသီးနှံ (Cucumis melo) သည် နိုင်ငံခြားသို့ တင်ပို့မှု ဒုတိယအများဆုံး သီးနှံဖြစ်သည်။ အသီး ပုံသဏ္ဍာန်မှာ အလုံးပုံ၊ ဘဲဥပုံ၊ လုံးရှည်ပုံ ဟူ၍ လည်းကောင်း အသီးခွံ အရောင်မှာ အစိမ်းရင့် ရောင် ၊ အဖြူရောင်၊ အ၀ါရောင် စသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုးတွေ့ရသည်။ အသီးခွံပေါ်တွင် ပိုက်ကွက် ပေါ်လွင် ထင်ရှားသောမျိုး၊ ပိုက်ကွက်များ မထင်မရှားပါဝင်သော မျိုးနှင့် ပိုက်ကွက်များ မပါသည့် ပြောချောမျိုး ဟူ၍ တွေ့ရသည်။ အသီးအတွင်းသား အရောင်မှာ အဖြူရောင်၊ ဖြူစိမ်းရောင်၊ လိမ္မော်ရောင် စသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုးကွဲပြားလျက် ရှိပါသည်။ သခွါးမွှေးသီးသည် နိုင်ငံခြားသို့ တင်ပို့မှု ရှိပြီး ပြည်တွင်းစားသုံးမှု မြင့်မားသော သီးနှံ တစ်မျိုး ဖြစ်၍ အန္တရာယ်ကင်းရှင်းစေရန်နှင့် အရည်အသွေး ကောင်းမွန်စေရန် အထူး လိုအပ်ပါသည်။ စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ရန်ကုန်တိုင်း နှင့် မန္တလေးတိုင်းတို့တွင် အများဆုံး စိုက်ပျိုးလျက်ရှိပါသည်.
စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ အလေ့အကျင်းကောင်းများဆိုသည်မှာ မြေပြုပြင် စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သည်မှ စားသုံးလက်ဝယ်ရောက်သည်အထိ ထုတ်လုပ်မှု ကွင်းဆက်တိုင်းတွင် စားသုံးသူအတွက် အန္တရာယ်ဖြစ်စေသည့် ကူးစက် ညစ်ညမ်းမှု အနည်းဆုံး ဖြစ်စေရန် လိုက်နာရမည့် နည်းလမ်းများကို စုစည်းထားသည့် စံလုပ်ထုံးလုပ်နည်း လမ်းညွှန်မှုများ ဖြစ်ပါသည်။
ဈေးကွက်လိုအပ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီ၍ ရေမြေဒေသရာသီဥတုနှင့် ကိုက်ညီသည့် သခွားသီး မျိုးကောင်းမျိုးသန့် များအသုံးပြုရန် လိုအပ်ပါသည်။ စိုက်ပျိုးမည့် သခွားမွှေးမျိုးနှင့် စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်များသည် ပိုးသတ်ဆေးအသုံးပြုမှု တတ်နိုင်သမျှ အနည်းဆုံး ဖြစ်သင့်ပြီး ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှု လျော့နည်းစေနိုင်မည့် နည်းစနစ်များနှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ အလေ့အကျင်းကောင်းများနှင့် သခွါးမွှေးသီးနှံ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မည်ဆိုပါက အောက်ပါအချက်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရပါမည်။
စိုက်ပျိုးမြေနှင့် အနီးဝန်းကျင်တွင် ဓါတုနှင့် ဇီဝဆိုင်ရာ အန္တရယ်ရှိသည့် မြေအမျိုးအစားမျိုး မဖြစ်စေရ။
သင့်တော်သည့် ဆားမပေါက်သဲနုန်းမြေ (သို့မဟုတ်) နုန်းမြေများတွင် စိုက်ပျိုးသင့်ပါသည်။
(၂၆ – ၃၀) ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ခန့်တွင် စိုက်ပျိုးရန် အသင့်တော်ဆုံး ဖြစ်သည်။
နေ့နှင့် ည အပူချိန် (၁၀) ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထက် ပို၍ ကွာခြားသော ဒေသများတွင် အချိုဓါတ်မြင့်မားပါသည်။
မြေချဉ်ငံဓါတ် (၆ – ၆.၅) နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်၊ ရေစီးရေလာကောင်း၍ ရေသွင်းရေထုတ် လွယ်ကူသော သဲနှုန်းမြေများတွင် ကောင်းမွန်စွာ ဖြစ်ထွန်းသည်။
မြေဆီလွှာတစ်ခုတည်းတွင် သခွားမွှေးပြီး သခွားမွှေး ထပ်၍ မစိုက်ပျိုးရပါ။
စိုက်ပျိုးရာတွင် အသုံးပြုမည့် ရေ အရည်အသွေးကို ဓါတ်ခွဲ စစ်ဆေးရမည်။
ရေသွင်းခြင်းနှင့် မရိတ်သိမ်းမီ ရေဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ရာတွင် မှတ်တမ်းများ ထားရှိရမည်။
မွေးမြူရေးဇုံ၊ ဆေးရုံ၊ စက်ရုံများမှ ဖြတ်သန်းလာသောရေ၊ မြူနီစပယ် စွန့်ပစ်ရေ နှင့် အန္တရာယ်ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့် ရေများကို အသုံးမပြုရ။ (ရေဆိုးရေညစ်များကို ပြန်လည်စီရင်၍ အသုံးပြုလျှင် WHO Guideline အရ လိုက်နာ အသုံးပြုရန်)
ရေမြေဒေသနှင့် ကိုက်ညီပြီး ပိုးမွှားရောဂါကင်းစင်သည့် အရည်အသွေးကောင်း မျိုးများကို ရွေးချယ်စိုက်ပျိုးသင့်ပါသ ည်။
စိုက်ပျိုးမည့် မျိုးစေ့/ ပျိုးပင်နှင့် မျိုးပွားအစိတ်အပိုင်းများကို ရရှိသည့်နေရာ၊ ရရှိသည့် အရည်အတွက် နှင့် ရရှိသည့် နေ့စွဲတို့ကို မှတ်တမ်းတင်ထားရှိရမည်။
တစ်ဧကလျှင် အညှောင့်မဖောက်မှီ နေရောင်ခြည်ကောင်းစွာ ရရှိသော နေရာတွင် (၃) နာရီခန့် နေလှန်းထားပေးရမည်။
ထို့နောက်နေရိပ်အောက်တင် အအေးခံထားပြီး (၅) နာရီကြာ ရေစိမ်ရပါမည်။
(၅) နာရီပြည့်သည့်အခါ မျိုးစေ့များကို ရေစိမ်၍ (၁) နာရီခန့်လေသလပ်ထားပြီး အပေါက်ကလေးများဖောက်ထားသည့် ပလတ်စတစ်အဖြူတွင် ထည့်ပြီး (၂) ပေခန့် အမြင့်ရှိသော စက္ကူကတ်ပုံးထဲတွင် ထားပြီး မျိုးစေ့ထုတ်ပေါ်မှာ (၁) ပေခွဲခန့် အကွာတွင် (၄၀) ၀ပ် (သို့မဟုတ်) (၆၀) ၀ပ်မီးသီးဖြင့် (၂၄) နာရီ ကြာအောင် အပူပေးထားရမည်။
လျှပ်စစ်မီးမရရှိသောဒေသများတွင် လေလုံသောပုံး/ မြေအိုးတွင် ထည့်ပြီး (၁ -၂) ရက်ခန့် အပူပေးကာ မျိုးညှောင့်ဖောက် ပေးသင့်ပါသည်။
မျိုးညှောင့်ဖောက်ပြီး မျိုးစေ့များကို (၄ x ၅) လက္မ ပလတ်စတစ်အိတ်များ (သို့မဟုတ်) (၂) လက်မပက်လည် ပလတ်စတစ် ပျိုးခွက်များတွင် ထည့်၍ ပျိုးထောင်သင့်ပါသည်။
သခွားမွှေးသီးနှံအတွက် အသုံးပြုမည့်မြေသြဇာ (သို့မဟုတ်) မြေဆီလွှာ ဖြည့်စွက်ပစ္စည်းများ တွင် အန္တရာယ်ဖြစ်စေသော ဓါတုနှင့် ဇီဝဆိုင်ရာပစ္စည်းများ ပါဝင်ခြင်းမရှိစေရ။
သဘာဝမြေသြဇာများအား ကောင်းစွာဆွေးမြေ့အောင် ဆောင်ရွက်ပြီးမှ အသုံးပြုရမည်။
မြေသြဇာ သို့မဟုတ် မြေဆီလွှာ ဖြည့်စွက်ပစ္စည်း ရောနှောခြင်း ၊ သိုလှောင်ခြင်း အော်ဂဲနစ်ပစ္စည်းများကို ဆွေးမြေ့စေရန်ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ကိုမြေနှင့် ရေအရင်းအမြစ် သန့်ရှင်းမှုကို ထိခိုက်စေသော နေရာများတွင် မပြုလုပ်ရ။
မြေသြဇာ (သို့မဟုတ်) မြေဆီလွှာ ဖြည့်စွက် ပစ္စည်းများ ၀ယ်ယူသုံးစွဲရာတွင်တရားဝင်မှတ်ပုံ တင်ထားသော ပစ္စည်းများဖြစ်ရမည့်အပြင် မှတ်တမ်းများ ထားရှိရမည်။
စိုက်ပျိုးရေးသုံးဓါတုဆေးများ နှင့် အခြားဓါတုပစ္စည်းများ
ဓာတုဆေးများအသုံးပြုမှု အနည်းဆုံးဖြစ်စေရန် ဘက်စုံပိုးမွှားကာကွယ်ရေး နည်းစနစ်များကို အသုံးပြုရပါမည်။
ပိုးသတ်ဆေး ဥပဒေ၊ မြေသြဇာဥပဒေ နည်းဥပဒေများနှင့်အညီ ပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့် လူသားတို့၏ ကျန်းမာရေး ထိခိုက်မှုများမဖြစ်စေရေး အထူးဂရုပြုရပါမည်။
ဓါတုဆေးများကို အသုံးပြုရန် လိုအပ်ပါက တရားဝင်အသိအမှတ်ပြု မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ဓါတုဆေးများကိုသာ အသုံးပြုရပါမည်။
ဆေးဖျန်းပြီးနောက် မရိတ်မီ စောင့်ဆိုင်းရမည့် ရက်ကာလအပိုင်းအခြားကို အတိအကျ လိုက်နာရမည်။
ပိုးသတ်ဆေး စနစ်တကျ ကိုင်တွယ်သုံးစွဲနည်းကို အတိအကျ သိရှိနားလည်ထား၇မည်။
ဓါတုဆေးများ ၀ယ်ယူ၊ သိုလှောင်၊ သုံးစွဲမှု၊ အသုံးချမှု နှင့် စွန့်ပစ်မှုတိုိ့ကို စနစ်တကျ ဆောင်ရွက်၍ မှတ်တမ်းများ ထားရှိရမည်။
လောင်စာဆီ၊ချောဆီနှင့် အခြားသော စိုက်ပျိုးရေးသုံးမဟုတ်သည့် ဓာတုဆေးများကို သီးနှံများ ညစ်ညမ်းမှု အန္တရာယ် အနည်းဆုံး ဖြစ်စေရန် ကိုင်တွယ်အသုံးပြုခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်းနှင့် စွန့်ပစ်ခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ရပါမည်။
သခှားမှေးသီးနှံ စိုကျပြိုးရေးဆိုငျရာ အလအေ့ကငျြ့ကောငျးမြား အပိုငျး (၁)
မွနျမာအမညျ – သခှါးမှေးသီး
အင်ျဂလိပျအမညျ – Muskmelon
သိပ်ပံအမညျ – Cucumis melo
မြိုးရငျး – Cucurbitaceae
သခှါးမှေးသီးနှံ (Cucumis melo) သညျ နိုငျငံခွားသို့ တငျပို့မှု ဒုတိယအမြားဆုံး သီးနှံဖွဈသညျ။ အသီး ပုံသဏ်ဍာနျမှာ အလုံးပုံ၊ ဘဲဥပုံ၊ လုံးရှညျပုံ ဟူ၍ လညျးကောငျး အသီးခှံ အရောငျမှာ အစိမျးရငျ့ ရောငျ ၊ အဖွူရောငျ၊ အဝါရောငျ စသညျဖွငျ့ အမြိုးမြိုးတှရေ့သညျ။ အသီးခှံပျေါတှငျ ပိုကျကှကျ ပျေါလှငျ ထငျရှားသောမြိုး၊ ပိုကျကှကျမြား မထငျမရှားပါဝငျသော မြိုးနှငျ့ ပိုကျကှကျမြား မပါသညျ့ ပွောခြောမြိုး ဟူ၍ တှရေ့သညျ။ အသီးအတှငျးသား အရောငျမှာ အဖွူရောငျ၊ ဖွူစိမျးရောငျ၊ လိမ်မျောရောငျ စသညျဖွငျ့ အမြိုးမြိုးကှဲပွားလကျြ ရှိပါသညျ။ သခှါးမှေးသီးသညျ နိုငျငံခွားသို့ တငျပို့မှု ရှိပွီး ပွညျတှငျးစားသုံးမှု မွငျ့မားသော သီးနှံ တဈမြိုး ဖွဈ၍ အန်တရာယျကငျးရှငျးစရေနျနှငျ့ အရညျအသှေး ကောငျးမှနျစရေနျ အထူး လိုအပျပါသညျ။ စဈကိုငျးတိုငျး၊ ရနျကုနျတိုငျး နှငျ့ မန်တလေးတိုငျးတို့တှငျ အမြားဆုံး စိုကျပြိုးလကျြရှိပါသညျ.
စိုကျပြိုးရေးဆိုငျရာ အလအေ့ကငျြးကောငျးမြားဆိုသညျမှာ မွပွေုပွငျ စိုကျပြိုးထုတျလုပျသညျမှ စားသုံးလကျဝယျရောကျသညျအထိ ထုတျလုပျမှု ကှငျးဆကျတိုငျးတှငျ စားသုံးသူအတှကျ အန်တရာယျဖွဈစသေညျ့ ကူးစကျ ညဈညမျးမှု အနညျးဆုံး ဖွဈစရေနျ လိုကျနာရမညျ့ နညျးလမျးမြားကို စုစညျးထားသညျ့ စံလုပျထုံးလုပျနညျး လမျးညှနျမှုမြား ဖွဈပါသညျ။
ဈေးကှကျလိုအပျခကျြနှငျ့ ကိုကျညီ၍ ရမွေဒေသေရာသီဥတုနှငျ့ ကိုကျညီသညျ့ သခှားသီး မြိုးကောငျးမြိုးသနျ့ မြားအသုံးပွုရနျ လိုအပျပါသညျ။ စိုကျပြိုးမညျ့ သခှားမှေးမြိုးနှငျ့ စိုကျပြိုးနညျးစနဈမြားသညျ ပိုးသတျဆေးအသုံးပွုမှု တတျနိုငျသမြှ အနညျးဆုံး ဖွဈသငျ့ပွီး ပတျဝနျးကငျြ ထိခိုကျမှု လြော့နညျးစနေိုငျမညျ့ နညျးစနဈမြားနှငျ့ တှဲဖကျအသုံးပွုဆောငျရှကျရမညျ ဖွဈပါသညျ။
စိုကျပြိုးရေးဆိုငျရာ အလအေ့ကငျြးကောငျးမြားနှငျ့ သခှါးမှေးသီးနှံ စိုကျပြိုးထုတျလုပျမညျဆိုပါက အောကျပါအခကျြမြားကို လိုကျနာဆောငျရှကျရပါမညျ။
– စိုကျပြိုးမွနှေငျ့ အနီးဝနျးကငျြတှငျ ဓါတုနှငျ့ ဇီဝဆိုငျရာ အန်တရယျရှိသညျ့ မွအေမြိုးအစားမြိုး မဖွဈစရေ။
– စိုကျကှငျးမွပေုံနှငျ့ မှတျတမျးထားရှိရမညျ။
– သငျ့တျောသညျ့ ဆားမပေါကျသဲနုနျးမွေ (သို့မဟုတျ) နုနျးမွမြေားတှငျ စိုကျပြိုးသငျ့ပါသညျ။
– (၂၆ – ၃၀) ဒီဂရီစငျတီဂရိတျခနျ့တှငျ စိုကျပြိုးရနျ အသငျ့တျောဆုံး ဖွဈသညျ။
– နနှေ့ငျ့ ည အပူခြိနျ (၁၀) ဒီဂရီစငျတီဂရိတျထကျ ပို၍ ကှာခွားသော ဒသေမြားတှငျ အခြိုဓါတျမွငျ့မားပါသညျ။
– မွခေဉျြငံဓါတျ (၆ – ၆.၅) နှငျ့ ပတျဝနျးကငျြ၊ ရစေီးရလောကောငျး၍ ရသှေငျးရထေုတျ လှယျကူသော သဲနှုနျးမွမြေားတှငျ ကောငျးမှနျစှာ ဖွဈထှနျးသညျ။
– မွဆေီလှာတဈခုတညျးတှငျ သခှားမှေးပွီး သခှားမှေး ထပျ၍ မစိုကျပြိုးရပါ။
– စိုကျပြိုးရာတှငျ အသုံးပွုမညျ့ ရေ အရညျအသှေးကို ဓါတျခှဲ စဈဆေးရမညျ။
– ရသှေငျးခွငျးနှငျ့ မရိတျသိမျးမီ ရဖွေတျခွငျးလုပျငနျးမြားကို ဆောငျရှကျရာတှငျ မှတျတမျးမြား ထားရှိရမညျ။
– မှေးမွူရေးဇုံ၊ ဆေးရုံ၊ စကျရုံမြားမှ ဖွတျသနျးလာသောရေ၊ မွူနီစပယျ စှနျ့ပဈရေ နှငျ့ အန်တရာယျဖွဈပျေါနိုငျသညျ့ ရမြေားကို အသုံးမပွုရ။ (ရဆေိုးရညေဈမြားကို ပွနျလညျစီရငျ၍ အသုံးပွုလြှငျ WHO Guideline အရ လိုကျနာ အသုံးပွုရနျ)
– ရမွေဒေသေနှငျ့ ကိုကျညီပွီး ပိုးမှားရောဂါကငျးစငျသညျ့ အရညျအသှေးကောငျး မြိုးမြားကို ရှေးခယျြစိုကျပြိုးသငျ့ပါသ ညျ။
– စိုကျပြိုးမညျ့ မြိုးစေ့/ ပြိုးပငျနှငျ့ မြိုးပှားအစိတျအပိုငျးမြားကို ရရှိသညျ့နရော၊ ရရှိသညျ့ အရညျအတှကျ နှငျ့ ရရှိသညျ့ နစှေဲ့တို့ကို မှတျတမျးတငျထားရှိရမညျ။
– တဈဧကလြှငျ အညှောငျ့မဖောကျမှီ နရေောငျခွညျကောငျးစှာ ရရှိသော နရောတှငျ (၃) နာရီခနျ့ နလှေနျးထားပေးရမညျ။
– ထို့နောကျနရေိပျအောကျတငျ အအေးခံထားပွီး (၅) နာရီကွာ ရစေိမျရပါမညျ။
– (၅) နာရီပွညျ့သညျ့အခါ မြိုးစမြေ့ားကို ရစေိမျ၍ (၁) နာရီခနျ့လသေလပျထားပွီး အပေါကျကလေးမြားဖောကျထားသညျ့ ပလတျစတဈအဖွူတှငျ ထညျ့ပွီး (၂) ပခေနျ့ အမွငျ့ရှိသော စက်ကူကတျပုံးထဲတှငျ ထားပွီး မြိုးစထေု့တျပျေါမှာ (၁) ပခှေဲခနျ့ အကှာတှငျ (၄၀) ဝပျ (သို့မဟုတျ) (၆၀) ဝပျမီးသီးဖွငျ့ (၂၄) နာရီ ကွာအောငျ အပူပေးထားရမညျ။
– လြှပျစဈမီးမရရှိသောဒသေမြားတှငျ လလေုံသောပုံး/ မွအေိုးတှငျ ထညျ့ပွီး (၁ -၂) ရကျခနျ့ အပူပေးကာ မြိုးညှောငျ့ဖောကျ ပေးသငျ့ပါသညျ။
– မြိုးညှောငျ့ဖောကျပွီး မြိုးစမြေ့ားကို (၄ x ၅) လက်မ ပလတျစတဈအိတျမြား (သို့မဟုတျ) (၂) လကျမပကျလညျ ပလတျစတဈ ပြိုးခှကျမြားတှငျ ထညျ့၍ ပြိုးထောငျသငျ့ပါသညျ။
– သခှားမှေးသီးနှံအတှကျ အသုံးပွုမညျ့မွသွေဇာ (သို့မဟုတျ) မွဆေီလှာ ဖွညျ့စှကျပစ်စညျးမြား တှငျ အန်တရာယျဖွဈစသေော ဓါတုနှငျ့ ဇီဝဆိုငျရာပစ်စညျးမြား ပါဝငျခွငျးမရှိစရေ။
– သဘာဝမွသွေဇာမြားအား ကောငျးစှာဆှေးမွအေ့ောငျ ဆောငျရှကျပွီးမှ အသုံးပွုရမညျ။
– မွသွေဇာ သို့မဟုတျ မွဆေီလှာ ဖွညျ့စှကျပစ်စညျး ရောနှောခွငျး ၊ သိုလှောငျခွငျး အျောဂဲနဈပစ်စညျးမြားကို ဆှေးမွစေ့ရေနျဆောငျရှကျခွငျးတို့ကိုမွနှေငျ့ ရအေရငျးအမွဈ သနျ့ရှငျးမှုကို ထိခိုကျစသေော နရောမြားတှငျ မပွုလုပျရ။
– မွသွေဇာ (သို့မဟုတျ) မွဆေီလှာ ဖွညျ့စှကျ ပစ်စညျးမြား ဝယျယူသုံးစှဲရာတှငျတရားဝငျမှတျပုံ တငျထားသော ပစ်စညျးမြားဖွဈရမညျ့အပွငျ မှတျတမျးမြား ထားရှိရမညျ။
စိုကျပြိုးရေးသုံးဓါတုဆေးမြား နှငျ့ အခွားဓါတုပစ်စညျးမြား
– ဓာတုဆေးမြားအသုံးပွုမှု အနညျးဆုံးဖွဈစရေနျ ဘကျစုံပိုးမှားကာကှယျရေး နညျးစနဈမြားကို အသုံးပွုရပါမညျ။
– ပိုးသတျဆေး ဥပဒေ၊ မွသွေဇာဥပဒေ နညျးဥပဒမြေားနှငျ့အညီ ပတျဝနျးကငျြ ညဈညမျးခွငျးနှငျ့ လူသားတို့၏ ကနျြးမာရေး ထိခိုကျမှုမြားမဖွဈစရေေး အထူးဂရုပွုရပါမညျ။
– ဓါတုဆေးမြားကို အသုံးပွုရနျ လိုအပျပါက တရားဝငျအသိအမှတျပွု မှတျပုံတငျထားသညျ့ ဓါတုဆေးမြားကိုသာ အသုံးပွုရပါမညျ။
– ဆေးဖနျြးပွီးနောကျ မရိတျမီ စောငျ့ဆိုငျးရမညျ့ ရကျကာလအပိုငျးအခွားကို အတိအကြ လိုကျနာရမညျ။
– ပိုးသတျဆေး စနဈတကြ ကိုငျတှယျသုံးစှဲနညျးကို အတိအကြ သိရှိနားလညျထား၇မညျ။
– ဓါတုဆေးမြား ဝယျယူ၊ သိုလှောငျ၊ သုံးစှဲမှု၊ အသုံးခမြှု နှငျ့ စှနျ့ပဈမှုတို့ကို စနဈတကြ ဆောငျရှကျ၍ မှတျတမျးမြား ထားရှိရမညျ။
– လောငျစာဆီ၊ခြောဆီနှငျ့ အခွားသော စိုကျပြိုးရေးသုံးမဟုတျသညျ့ ဓာတုဆေးမြားကို သီးနှံမြား ညဈညမျးမှု အန်တရာယျ အနညျးဆုံး ဖွဈစရေနျ ကိုငျတှယျအသုံးပွုခွငျး၊ သိုလှောငျခွငျးနှငျ့ စှနျ့ပဈခွငျးတို့ကို ပွုလုပျရပါမညျ။
သခွားမွှေးသီးနှံ စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ အလေ့အကျင့်ကောင်းများ အပိုင်း (၂)သခွား⁠မွှေးတွင် ကျ⁠ရောက်⁠သော ပိုးမွှားများ⁠နှင့် ကာကွယ်⁠နှိမ်နင်းနည်းများ
Pissaya AdminMar 12, 2020